🥇 ▷ 8 Barnaamij si ay ugu duubtaan iPhone-ka ✅
8 Barnaamij si ay ugu duubtaan iPhone-ka
Ka wareejinta qalabkaaga macruufka waa suurtagal, waxaan kuugu tageynaa barnaamijyo bilaash ah
Mid ka mid ah waxyaabaha sida xaqiiqda ah aadan uga fikireyn ilaa hadda ayaa ah suurtagalnimada inaad la kulanto dad kale oo aad kula bixi karto iPhone-kaaga, sababtan hoose waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo kala duwan codsiyada aad u isticmaali karto inaad toos ugala xiriirto iPhone iyo iPad.
Dabcan, inkasta oo ujeeddadiisu ay had iyo goor isku mid tahay, howlaha barnaamijyadan loogu talagalay aaladaha iOS Apple Way kala duwan yihiin waxayna noo oggolaan doonaan inaan la kulanno dadka ujeeddooyinkeenna ka leh dhadhanka iyo isbeddeladayada. Waad kula xiriiri kartaa dad cusub, oo kuu dhow taasina waa wax xiiso leh, oo dhammaantood si toos ah taleefankaaga uga soo baxa, taasi way fududahay. Ha seegin tan oo dhammaystiran isku duwidda arjiga si ay ula kulmaan dadka ka socda iPhone Hoos ayaan kaaga tageynaa.
Tinder waa hab xiiso leh oo lagula xiriiro dadka cusub ee xiisaha leh ee kugu xeeran. U jiid dhanka midig haddii qofka aad jeceshahay ama bidix u dhaafo. Haddii qof kuu jecel yahay, waad is waafaqi kartaa! La sheekeyso qof la jaan qaada ama sawir qaado si aad daqiiqad ula wadaagtid dhammaan dadka aad isla wadaagi kartaan. Waa hab cusub oo aad naftaada u muujiso oo aad saaxiibbadaa kula wadaagtid.
HAPPN waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato dadka aad ka soo gudubtay, waxaad jeceshahay iyo inaad jeclaan laheyd inaad mar kale aragto. HAPPN waa App kaas oo aadan waayi doonin fursada aad kula kulanto qof (100% yaab, 100% Qarsoodi iyo amaan, 100% Isbeddel).
HAPPN waxaa loo naqshadeeyay iyada oo loo eegayo mabda’a iscasilaada: weligaa kama heli doontid farriin ka timid qof aadan daneyneynin. Intaa waxaa sii dheer, sirtu sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha ay mudnaanta siinayaan, sidaa darteed goobtaada ayaa weligeed sii ahaaneysa xubnaha kale.
Buundada waxay kugu xiraysaa dadka kugu xeeran. Laba qof waxay ku sawiraan astaantooda dhinaca midig waxayna ku xirnaadaan ‘wax badan’. Gabadhu waa inay ku bilowdaa wada hadalka 24 saacadood gudahood. ama xiriirku weligiis wuu lumay. Xiriirka ka dhexeeya dadka isku jinsi ah, midkoodna wuxuu bilaabi karaa wada hadalka, haa, 24 saac gudahood. Maxaa dhacaya haddii waqtigu kaa dhammaado? Ha walwelin, qof walba wuu kordhin karaa xiriir maalin, isagoo ku dara 24 saacadood oo dheeraad ah.
eHarmony waa shukaansi adeegga tooska ah ee internetka laga doorto oo ka caawiya in ka badan 438 qof inay guursadaan maalin kasta. Sida adeegga shukaansi ee aadka loo aaminay, waxaan ku bilaabeynaa inaan si wanaagsan kuu aqoonsanno ka dibna waxaan kuu soo bandhigeynaa kalgacalka ugu layaabka badan ee la jaan qaada meel kasta oo ay joogaan. Iyada oo la adeegsanayo barnaamijka ‘eHarmony iPhone app’, waxay qaadataa daqiiqado yar in la is qoro oo lagu helo astaantaada ugu horreysa ee la jaan qaada; Waxaas oo dhanna waa lacag la’aan.
U ogolow app shukaansi app kaa caawin inaad soo baxay si ay ula kulmaan dadka keligood ah! Zoosk wax ka barato dhadhankaaga, sidaa darteed hadba inta aad u isticmaasho, ayaa isbarbardhigyada ka sii fiican ay ku tusaysaa. Waad ku mahadsan tahay qaabkaaga shakhsi ahaaneed ee shukaansi adduunka, inaad ku xirnaato dadka keli ah ee deegaankaaga ah iyo helitaanka nus-kaaga wanaagsan ayaa kuu fududaan doona.
LOVOO adoo dhaqso iyo si fudud ula kulmi doona dadka kuu dhow. Soo ogow cidda leh danahaaga deegaankaaga, la hadal dadka ama arag sawirrada dadka kale. Sidan waa sida ay LOVOO u shaqeyso: Raadi dadka agagaarkaaga ah (Ku dadaal radar-gaaga oo ogow cidda hadda kuu dhow), Xiriir (La ciyaar Ciyaarta si aad u hesho dad kula sheekeysta ama xitaa jaceylkaaga dhabta ah. Raac dadka leh danaha isla midka ah inaadan lumin.) waxba maysid), Muuji sawiradaada ugufiican (Sawirro ku dhaji waxkastoo aad sameeyso adna aad tahay qof xiise badan. Ku calaamadi #hashtags).
POF- Shukaansi Khadka tooska ah ee bilaashka ah
Codsiga shukaansi POF wuxuu leeyahay astaamo dheeraad ah oo bilaash ah oo kaa caawinaya inaad bilowdid shukaansi: isticmaal algorithm-ka istiraatiijiyadda horumarsan, hubi kuwa kugu habboon, waxaad ku amri kartaa khadka ugu dambeeya ee internetka, isticmaaleyaasha cusub iyo kuwo kaloo badan, ugu muhiimsan, dirista iyo helitaanka farriimaha aan xadidneyn.
Skout – La kulan dadka, sheekeyso oo saaxiibo samee
Si dhakhso leh ula kulan dadka kuugu dhaw ama meel kasta oo adduunka ah. Baadh saaxiibo cusub barta geeska ama magaalada Barcelona. Malaayiin dad ah ayaa ku xira kuna kulma Skout maalin kasta. Iyada oo leh astaamaha cajiibka ah ee lagu dhex dhisay barnaamijka waxaad kordhin kartaa fursadaha saaxiibo sameysatid, wada sheekeysi ama xiriir qof la yeelatid.
Ku ballaari shabakadaada bulshada taabashada badhanka. Waa wax aad u xiiso badan oo aadan joojin karin! La bilow naftaada Skout oo hel xafladda aad sida ugu fiican u jeceshahay, saaxiibo cusub sameyso ama qof u raac waqti kasta, meel kasta.
Barnaamijyo dheeri ah oo loogu duceeyo iPhone
Kadib waxaan kugu dhaafin doonaa dalabyo badan oo laga heli karo App Store ee loogu talagalay iPhone oo aad kula xiriiri karto:
Codsiyada noocee ah ayaad u isticmaashaa inaad kaga duubto iPhone-ka? Miyaad horay u isticmaashay mid ka mid ah kuwa aan ku soo jeedinay maqaalkan mise waxaad door bidaysaa mid ka duwan? Noosheeg faallooyinka.